Moyo wemaruva wezuva reValentine - Nhanho nhanho | Mhizha On
Mwoyo wemaruva ezuva raValentine - Nhanho nhanho
Irene Gil | | Crafts, Mapepa emhizha, Mhizha dzeZuva raValentine, Crafts uye zvinhu
Mune izvi Tutorial Ini ndinokudzidzisa iwe kugadzira iyo ruva moyo kushongedza kana chipo mukati Zuva reValentine o Zuva reValentine. Zvishandiso zvakachipa uye zviri nyore kuwana, uye hunyanzvi hwakareruka kuita.
Kuita ruva moyo iwe unozoda zvinotevera zvinhu:
Makamuri maviri Circle Drills
Chinhu chekutanga chauchazoda kutanga kugadzira yako ruva moyo Chichava chidimbu chekadhibhodhi, bepa, penzura, chigero uye banga rekushandisa. Iwe unofanirwa kutendeuka ne hafu yepepa uye dhonza pane imwe yehafu mahafu maviri emoyo, imwe hafu yakakura kupfuura imwe, sezvaungaona mumifananidzo. Cheka pamitsetse pamwe neshiti yakaramba yakakotama, nenzira iyi, kana uchizarura chidimbu chawacheka, unowana mwoyo wakakwana uye wakazara.
Imwe sarudzo ndeye kutsvaga kana kuprinta moyo wawakawana online. Rangarira kuti iwe unofanirwa kumaka saizi mbiri dzakasiyana.
Nezve izvo template kukadhibhodhi. Maka nepenzura iyo yose contour pachigamba chemakadhibhokisi uye ucheke nebanga rekushandisa. Usashandise chigero kudzivisa kukwenya kumucheto kwekadhibhodhi.
Zvino zvatave nehurongwa hwaitwa, tichagadzira iyo maruva izvo zvichafukidza mwoyo. Unoda iyo denderedzwa drills, imwe diki pane imwe, kana kukundikana iyoyo, cheka denderedzwa nekasi, zvakare hafu yeimwe saizi nehafu yeimwe saizi.
Paunenge uine zvakawanda denderedzwa cheka iwe uchada hura hwako. Ndini ndakavasarudza tsvuku asi zvirokwazvo mavara achataridzikawo akanaka pauri. Gira bheji pairi denderedzwa diki neyakaipisa silicone uye kuunyana ndokuti denderedzwa richiputira iro. Ipapo iwe unama iyo yakaiswa pamusoro pe denderedzwa hombe, Iine silicone. Uyezve, anozviputira zvese zvakare nedenderedzwa hombe. Crinkle zvakanaka kuti muchereke mapepa emapepa.
Vhura bepa zvakare, asi usariruramisa. Regai iyo kuunyana uye micheto kumusoro. Icho chokwadi chekuti bead inoonekwa yakakwana. Tarisa uone kuti inotaridzika sei mumufananidzo unotevera.
Ita zvakawanda maruva sezvaunoda kuvhara yako kadhibhodhi moyo. Iyo yakakura chimiro, maruva mazhinji aunofanirwa kugadzira, kunyange aya achigonawo kuve makuru. Namatira navo silicone kuzvigadzirisa munguva uye kutevedzera zvakakwana. Iwe unogona zvakare kuvhara mativi ese maviri kana uchizoisungirira, kana kuisa maruva chete kune rimwe divi kana ichizonamatidzwa kumusoro.
Uye kana iwe wafukidza moyo wese, izvi zvichave izvo mhedzisiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mhizha On » Crafts » Mwoyo wemaruva ezuva raValentine - Nhanho nhanho
Arrow peni yekupa paZuva raValentine
Envelope kadhi ine teddy bere uye moyo wekupa paZuva raValentine